Waraaq ku Socota Samsam Axmed Ducaale
ku: Samsam Axmed Ducaalle
Ka: Cabdirashiid Faarax Xassan
Waxaad u gashay dad intii adiga lagugu barbaarinayey sinaanta muslimiinta, iyaga lagu qufulay nacaybka reerkii aan la qolo ahayn....
Adeer salaan ka gadaal kuwa aad hadda u xiran tahay, oo kufsiga iyo jirdilka kuga wadaa waxay kuu qabaan in aad tahay nacab ka caqli iyo khibrad badan, laakiin arrinku sidaas maahan, waxaa tahay gabar soomaaliyeed,oo ku soo kortay cuqdad la’aan, waalidkaa kuguma soo barbaarin in aad colaadisid ummadaha aydaan isku isirka ahayn. Marna kama aadan fakarin in ay kuu kala duwan yihiin Caluula iyo Mooyaale ama Lawyocado iyo Afgooye. Dadka soomaaliyeed badankiisa waxaad u tahay gabar yar oo ay adeer iyo eedo u yahiin, laakiin carruurnimadii ayaa waxay ku dhaafsiisay in soomaalida qaarkood kaa qabaan fakrad ka duwan tan aad adigu iyaga ka haysatid.
Haddaba haddii aad markii hore ahayd gabar yar, hadda waxaad Hargeysa iyo nawaaxigeeda ka tahay qof ma’suul ah oo isha lagu hayo. Waxaad u gashay dad intii adiga lagugu barbaarinayey sinaanta muslimiinta, iyaga lagu qufulay nacaybka reerkii aan la qolo ahayn.
Waan la socdaa in aan laguu ogolayn wargays iyo raadiye, laakiin haddaan kuu soo ururiyo waxii ay kaa sheegeen dadka aad hadda godka ugu jirtid waa sidaan:
Ninka ciidanka ku kufsada madaxda u ah ee la yiraahdo Maxamed Cige Cilmi waxuu laanta af soomaaliga ee BBC:da ka qirtay in uu masarkii iyo garbasaartii kaa furay. Waxaa kale isna la waraystay madaxweyne kuxigeenka beesha aad hadda xabsiga ugu jirtid Axmed Yuusuf Ducaalle. Axmed waxaa ka socotey ilmo waxuuna ahaa nin argagaxsan oo aad kaaga baqaya. Wariye Axmed Saciid Cige waxuu waayahaan u banbaxay caydaada iyo in uu lo’ gisiga kugu didiyo.
Nelson Mandela waxuu yiri: ”Dadkii aan u xirnaa badankoodo waxay ahaayeen waxmagarto, oo hadalka waan u dajin jirey.” Adigana sida Mandela ayaa lagaa rabaa adeer.